बिरालाहरूमा पीलियाको बारेमा | Noti बिरालाहरू
बिरालाहरूमा पीलियाको लक्षण र उपचार के हो?
मारिया जोस रोल्डन | | रोगहरू
यदि तपाई बिरालोलाई तपाईले मन पराउनु भयो भने तपाई सँधै स्वस्थ रहन चाहानुहुन्छ, तर वास्तविकता यो हो कि एक जीवित प्राणीको रूपमा, यसको जीवनकालमा यो एक पटक भन्दा बढी बिरामी पर्न सक्छ। यद्यपि अरु भन्दा धेरै गम्भीर बिरामीहरु छन्, जब यसको लक्षणहरु मध्ये एक पफुको हो तपाईले सम्भव भएमा बढी चिन्ता गर्नुपर्नेछ।
यसको लागि, हामी बिरालाहरूमा पीलियाको बारेमा सबै कुरा बताउन गइरहेका छौं: यसको कारणहरू, लक्षणहरू र अधिक। पहिले हामी तपाईलाई बिलीरुबिन भनेको के हो बताउँदछौं, यस तरिकाले तपाईले केहि राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ जुन हामी पछि वर्णन गर्दछौं।
1 बिलीरुबिन भनेको के हो?
2 किन पौंडी बिरालाहरूमा देखा पर्छ?
2.1 बिरालाहरूमा पीलियाको लक्षण
3 पीलिया भनेको के हो?
4.1 हेपाटिक पीलिया
4.2 पोस्टहेपेटिक पीलिया
4.3 गैर हेपाटिक पीलिया
5 तपाई कसरी निदान गर्नुहुन्छ?
6 यसको उपचार के हो?
बिलीरुबिन भनेको के हो?
बिलीरुबिन त्यस्तो उत्पादन हो जुन ईरोट्रोसाइट्स (रातो रक्त कोशिका) को जीवनको चक्रको अन्त (जुन १०० दिन) मा टुक्रिन्छ र हड्डी मज्जा र प्लीहामा नष्ट हुँदा गठन हुन्छ। तिनीहरू आफ्नो प्राकृतिक रातो रंग देखि पहेलो हुन जान्छन्, र यो जब बिलीरुइबिन हुन्छ।
यो एक जटिल प्रक्रिया हो जहाँ हेमोग्लोबिन पहिले बिलीभर्डिनमा परिणत हुन्छ र त्यसपछि चिल्लो घुलनशील बिलीरुबिनमा परिणत हुन्छ। यो रक्तप्रवाहमा जारी हुन्छ र एक प्रोटीनको साथ कलेजोमा यात्रा गर्दछ।
जब यो कलेजोमा पुग्छ, यो कन्ज्युगेटेड बिलीरुबिनमा परिणत हुन्छ र पित्ताशयमा जम्मा हुन्छ।। हरेक पल्ट पित्ताशयको सानो आंत मा खाली हुन्छ, एक सानो बिलीरुबिन पित्त र ब्याक्टेरिया संग बाहिर आउँछ। यो सामान्य रंगमा परिवर्तन हुन्छ: स्टेरकोबिलिन (जसले मललाई खैरो रंग दिन्छ) र यूरोबिलिनोजेन (जसले पेशाबलाई यसको पहेंलो रंग दिन्छ)।
किन पौंडी बिरालाहरूमा देखा पर्छ?
अघिल्लो बिन्दुमा टिप्पणी गरिएको कुराबाट तपाईंले महसुस गर्न सक्नुभयो, कलेजोको काम सम्पूर्ण प्रक्रियामा प्रमुख छ। पौंडी बिरालामा देखा पर्नेछ जब यसको शरीरले बिलीरुबिन निकाल्न सक्दैन र अन्य पित्त घटकों।
बिरालाहरूमा पीलियाको लक्षण
पनी पनी आफैं पहिले नै लक्षण हो जसले जनावरलाई स्वास्थ्य समस्या भइरहेको छ भन्ने संकेत गर्छ। यद्यपि यो ध्यान दिन लायक छ कि यस विकार को सबै भन्दा स्पष्ट संकेत पहेंलो रंग हो।
Este छाला पहेंलो यो मुख, कान र जहाँ कुनै भुवा नभएको ठाउँमा र बिरालाको छाला देख्न सकिन्छ।
पीलिया भनेको के हो?
रगत वा टिश्युहरूमा बिलीरुबिन भनेर चिनिने पिग्मेन्टको संचयको कारण छाला, मूत्र, सीरम र अंगहरूको पहेलो रंग हो।। बिलीरुबिन गठन हुन्छ जब रातो रक्त कोषहरू तिनीहरूको जीवनको अन्तमा पुग्दछ, जुन लगभग १०० दिनसम्म रहन्छ। यी रक्त कोषहरू प्लीहा र हड्डीको मज्जामा नष्ट हुन्छन्, र बिलीरुबिन हेमोग्लोबिनबाट बनिन्छ, जुन रंगले तिनीहरूलाई रंग दिन्छ। यो परिसंचरणमा जारी हुन्छ र प्रोटीनको साथ कलेजोमा यात्रा गर्दछ।
कलेजोमा यो कन्जुएटेड बिलीरुबिनमा परिणत हुन्छ र पित्ताशोषकमा भण्डार हुन्छ। हरेक पल्ट पित्ताशयलाई सानो आन्द्रामा खाली गरिन्छ, पित्तको अंशको साथ एक सानो बिलीरुबिन बाहिर आउँछ। अन्त्यमा, र धेरै ब्याक्टेरियाहरूको कार्य पछि, यो अन्य वर्णकहरूमा परिवर्तन हुन्छ: स्टेरकोबिलिन (मलको रंग) र यूरोबिलिनोजेन (पेशाबको)।
जब यो हुन्छ यो यकृतमा केहि गलत भएको कारणले हो; यसले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन र यो प्रवेश गरिरहेको बिलीरुबिन हटाउन सक्षम छैन। लिभर कोषहरू (हेपाटोसाइट्स) यस वर्णकलाई पित्त कालिकुलीमा बाहिर निकाल्छ। त्यो सेल नेटवर्कको माध्यमबाट चल्छ, जुन पित्ताशक्तिमा जान्छ।
अर्कोतर्फ, जब कोषहरूसँग केही पॅथोलॉजिकल अवस्था हुन्छ वा सूजन हुन्छ र बिलीरुबिन पित्त नलिका नेटवर्कमा जान सक्दैन, यो इन्ट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस हुँदा हुन्छ।
तसर्थ, यो हुन्छ जब कलेजो बिलीरुबिन जारी गर्न सक्दैन। सब भन्दा साधारण कारणहरू:
यो हुन्छ जब बिलीरुबिन कलेजो बाहिर जम्मा हुन्छ एक अवरोध को कारण। सब भन्दा साधारण कारणहरू:
डुओडेनम र पेनक्रियामा नियोप्लाज्म
पित्त नलिका फुट्ने
गैर हेपाटिक पीलिया
यो हुन्छ जब अधिक बिलीरुबिन उत्पादन गरिन्छ ताकि कलेजो रंगद्रव्य जारी गर्न असमर्थ छ रातो रक्त कोशिकाहरु को बिग्रन को एक परिणाम को रूप मा। कारणहरू:
भाइरल वा ब्याक्टेरिया संक्रमण
तपाई कसरी निदान गर्नुहुन्छ?
यदि तपाईलाई शंका छ कि तपाईको बिरालोलाई पौंला छ तपाईंले उनलाई तुरून्त पशु चिकित्सकमा लैजानु पर्छ। त्यहाँ एकचोटि, तपाईंसँग शारीरिक परीक्षण र परीक्षणहरूको श्रृंखला हुन्छ, जस्तै रक्त परीक्षण वा अल्ट्रासाउन्ड। थप रूपमा, चिकित्सा ईतिहासको साथ, तपाईं कारण के हुन सक्दछ भनेर जान्न सक्नुहुनेछ।
बिरालाहरूमा कि पन्त्री छ उन्नत कलेजो इन्जाइमहरू पत्ता लगाउन यो सजिलो छजे होस् यसले प्राथमिक वा माध्यमिक हेपाटोबिलीरी रोगलाई संकेत गर्दैन। यो केवल एक अभिमुखीकरण हो तर अल्ट्रासाउन्ड र रेडियोलोजिकल अध्ययन सधैं आवश्यक हुन्छ।
यस भन्दा पहिले पनि, चिकित्सा ईतिहास र आधारभूत जाँचले पशु चिकित्सकलाई थाइरोइड नोड्युलहरू फेला पार्न अनुमति दिनेछ, पेटमा तरल पदार्थ (सिस्टिटिस) र यो पनि जान्नुहोस् कि यदि तपाईंसँग हेपाटाटोक्सिक औषधिहरूमा कुनै प्रकारको जोखिम छ।
यस अर्थमा, पौंपी परिवर्तनको कारण एक लक्षण को रूप मा बुझिन्छ र यसैले यो साँच्चिकै हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन पूर्ण परीक्षणहरू गर्नु आवश्यक छ।
उपचार कारणमा धेरै निर्भर गर्दछ, जसले ध्यानमा राख्दछ कि त्यहाँ धेरै रोगहरू छन् जुन पीलियालाई एक लक्षणको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ। यो खानामा परिवर्तन गर्न एन्टिबायोटिक लिनबाट केहि पनि हुन सक्छ। के तपाईं कहिल्यै गर्न सक्नुहुन्न पहिले आफ्नो पशु चिकित्सकलाई सोध्नु बिना नै औषधी हो, अन्यथा यो घातक हुन सक्छ।
हामी आशा गर्दछौं कि तपाईले यो उपयोगी भएको पाउनुभयो। यस तरीकाले, तपाईको बिरालो यस अवस्थाबाट पीडित छ कि छैन भन्ने अन्तर्ज्ञान पाउन सक्नुहुन्छ र यदि हो भने, पशुचिकित्सकले चाँडो भन्दा चाँडो उसको विशेष केसको लागि उचित उपचार पाउनको लागि उनलाई जाँच गर्न सक्षम हुनेछ।
जे भए पनि, अब जब तपाईलाई थाहा छ बिरालोहरूमा पफुको लक्षण र उपचार के हो, तपाईलाई थोरै थाहा छ तपाईको बिरालोको स्वास्थ्यको राम्रो हेरचाह गर्न सक्षम हुनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: Noti बिरालाहरू » बिरालाहरू » रोगहरू » बिरालाहरूमा पीलियाको लक्षण र उपचार के हो?
बिरालाहरूमा ग्याँस: कारण र समाधानहरू
किन मेरो बिरालोको पछाडिको खुट्टा असफल हुँदैछ?